सेना प्रमुखको मृत्युमा चीन कनेक्सन, खुल्यो बेग्लै रहस्य ? - jagritikhabar.com
सेना प्रमुखको मृत्युमा चीन कनेक्सन, खुल्यो बेग्लै रहस्य ?
भारतका पहिलो चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावतको हिजो हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भयो। सीडिएस रावत, उनकी पत्नी मधुलिकासहित १३ जनाको ज्यान जानेगरी,
भएको यो दुर्घटनाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र हतियार नियन्त्रणका मुद्दाका विज्ञ, भू रणनीतिकार तथा लेखक ब्रह्मा चेलानीको प्रतिक्रियाले अहिले निकै हलचल ल्याएको छ।
चेलानीको धारणा सार्वजनिक भएसँगै चीनको प्रमुख सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्सले यस विषयमा कडा र आक्रामक प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रोफेसर चेलानीले सीडीएस रावतको हेलिकप्टर दुर्घटनाको विषयमा सिलसिलेवार ट्वीट गरेका छन्।
उनले ट्वीटमा सीडीएस रावत र ताइवानका चीफ अफ जनरल स्टाफ जनरल शेन यि मिंगको हेलिकप्टर दुर्घटनामै भएको मृत्युमा समानता भएको दावी गरेका छन्।
प्रोफेसर चेलानीले ट्वीट गर्दै लेखेका छन् ‘पछिल्लो २० महिनामा सीमामा तनावका कारण हिमालयको मोर्चामा युद्धजस्तो स्थिति उत्पन्न भएको थियो। यस्तो समयमा भारतका सीडीएस,
उनकी पत्नी र ११ अन्य सैन्यकर्मीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्युको घटना योभन्दा खराब समयमा हुन सक्दैन। उनले आफ्नो एक ट्वीटमा जनरल रावतको मृत्यु र ताइवानका जनरल स्टाफका प्रमुखको मृत्युमा डरलाग्दो समानता भएको दावी गरेका छन्।
२०२० को सुरुवातमा ताइवानका चीफ अफ जनरल स्टाफ जनरल शेन यि मिंगको हेलिकप्टर पनि दुर्घटना भएको थियो र २ प्रमुख जनरलहरुसहित सात जनाको मृत्यु भएको थियो।
यी दुवै हेलिकप्टर दुर्घटनामा ती २ सेनाका प्रमुखको मृत्यु भयो जो यस क्षेत्रमा चीनको आक्रामकताको विरुद्ध थिए ।उनले अर्को ट्वीटमा लेखेका छन् ‘यी अनौठा समानताको यो अर्थ होइन,
कि दुवै हेलिकप्टर दुर्घटनामा कुनै सम्बन्ध छ वा कुनै बाहिरी शक्तिको हात छ। जे भए पनि प्रत्येक दुर्घटनाले महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन् । विशेष रुपले शीर्ष जनरललाई लिएर जाने सैन्य हेलिकप्टरको रखरखावको बारेमा।
ग्लोबल टाइम्सले चेलानीको ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै उनीमाथि कडा कटाक्ष गरेको छ। ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ ‘यो दृष्टिकोणको हिसाबले त अमेरिकाको पनि यो हेलिकप्टर दुर्घटनामा भूमिका हुन सक्छ।
किनकि भारत र रुस एस–४०० मिसाइल रक्षा प्रणालीको साथमा अगाडि बढिरहेका छन् र अमेरिकाले यो डीललाई लिएर कडा विरोध जनाएको छ।
यो पनि :भारतीय रक्षा प्रमुख रावत चढेको हेलिकप्टर दुर्घटनामा गम्भीर षडयन्त्र: सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सुधीर सावन्तले भारतीय रक्षा प्रमुख विपिन रावतसहित १३ को ज्यान जानेगरी भएको हेलिकप्टर दुर्घटना भवितव्य नभएर षडयन्त्र हुन सक्ने आशंका गरेका छन्।
‘यहाँका मानिसहरूले पनि एलटीटीईलाई धेरै समर्थन गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सीडीएसको हेलिकप्टर दुर्घटना षडयन्त्रपूर्ण हमला हो, जसमा एलटीटीईका स्लीपर सेलहरू संलग्न हुने सम्भावना छ।
यदि यो आक्रमण हो भने एलटीटीईलाई आईएसआईले पनि समर्थन र सहयोग गरेको हुन सक्छ। भारतीय सेनामा ३५ वर्ष सेवा गरेका सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सुधीर सावन्तले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
सीडीएस हेलिकप्टरलाई निशाना बनाउनु एलटीटीईको रणनीतिको एक हिस्सा हुन सक्ने उनको आशंका छ। एलटीटीईका कार्यकर्ता बमबारे विज्ञ छन्।
यसबाहेक भारतको सबैभन्दा ठूलो सिपाहीको हत्या गर्ने उद्देश्य पनि एलटीटीईको छ। एनआईले यो डरलाग्दो हेलिकप्टर दुर्घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हेलिकप्टर दुर्घटनाका पछाडि यी ३ कारण हुन सक्छन्’ ब्रिगेडियर सावन्त भन्छन्, ‘कुनै पनि विमान वा हेलिकप्टर दुर्घटनाका पछाडि ३ कारण हुन्छन्। पहिलो– प्राविधिक त्रुटि, दोस्रो– पाइलटको त्रुटि र तेस्रो– बम प्लान्ट र ब्लास्टिङ।
अघिल्ला दुवै कुरामा पाइलट र एयर कन्ट्रोलबीच सञ्चार हुन्छ। पाइलटले मद्दतका लागि कल गर्छ र यी सबै कुराकानी ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड हुन्छन्। अहिले ब्ल्याक बक्स पनि भेटिएको छ।
यसैकारण यो दुर्घटना नै हो भने जानकारी बाहिर आउनेछ। तेस्रो सम्भावना बम राखेर हेलिकप्टर विस्फोट भएको हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा पाइलट र एयर कन्ट्रोलबीच कुनै सञ्चार हुँदैन र सबै कुरा अचानक हुन्छ।
यो क्षेत्र एलटीटीईको गढ भएकाले यस आक्रमणको पछाडि उसको स्लिपर सेलनको हात हुनसक्ने ठूलो आशंका छ।हामीले नै एलटीटीईलाई तालिम दियौं, हामीले नै मुठभेड पनि गर्यौं’
‘जुन क्षेत्रमा हेलिकप्टर दुर्घटना भयो त्यो वीरप्पनको पनि क्षेत्र हो। एलटीटीईको गढ पनि हो।उटी, कोइम्बटुर, मेट्युपालनका सम्पूर्ण जंगल वीरप्पनको क्षेत्र भएको छ’, ब्रिगेडियर सावन्त भन्छन्
म कमान्डो प्रशिक्षक थिएँ र हामी एलटीटीईसँग भिडन्त पनि गरेका छौं, त्यसैले हामीलाई एलटीटीईका सबै पल्स थाहा छ।उसको आक्रमण गर्ने शैली यस्तै हेलिकप्टर दुर्घटना गराउने हो।
उनका अनुसार एलटीटीई लामो समयदेखि भारत र भारतीय सेनासँग निकै क्रुद्ध छ। उनी थप्छन्, ‘भारतले एलटीटीईलाई ध्वस्त पार्यो र जाफ्नादेखि तमिलनाडुसम्म यसको नेटवर्क तोड्यो।
एलटीटीईको बाँकी नेतृत्व संलग्न हुन सक्छ। यस हमलामा पाकिस्तानी गुप्तचर एजेन्सी आईएसआई पनि संलग्न हुनसक्छ। सायद आईएसआई र एलटीटीई मिलेर गरेको होला।